နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge(11 များအတွက်စုစုပေါင်း မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge ထုတ်ကုန်များ)
မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ကျနော်တို့တရုတ်ထံမှ မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်း / စက်ရုံအထူးပြုနေကြသည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားအဖြစ်အနိမ့်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူလက်ကား မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge / စျေးပေါ, တရုတ်ထံမှအမှတ်တံဆိပ်ဦးဆောင်သည့် မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge များထဲမှ Botou Youjian Environmental Protection Equipment Co. LTD. ။
ကြယ်ပွင့် type ကိုချ -YDJ-HG (စတုရန်းပါးစပ်)
tag ကို: ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစားချ Square ကိုပါးစပ် , YJD-HG အမျိုးအစား discharge , ဂဟေဆော် Lock ကိုလေတပ် Valve
ကြယ်အမျိုးအစား discharge -YJD-HG အမျိုးအစား (စတုရန်းပါးစပ်) ၏အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို အဆိုပါကြယ်ပွင့် type ကို discharge အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါးပစ္စည်း၏အပူချိန် 280 ဒီဂရီစီရောက်ရှိနိုင်ပါသည် ultrafine...
tag ကို: Rotary Rotary Valve , မြင့်မားသောအပူချိန် discharge , မြင့်မားသောအပူချိန်ကျပ်ခိုး Valve
လြှောကျလှာ အဆိုပါကြယ်ပွင့် type ကိုချအဆိုပါကျီတစ်ခု၏ရိနာစွဲကိရိယာနှင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာကြယ်ပွင့် type ကို discharge အတွက်အများဆုံးအဆင့်မြင့်ကိုဖျက်ထုတ်စက်ကိုအဖြစ်စုဆောင်းခြင်းပစ္စည်းသည့်စနစ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။...
အဆိုပါ YJD-တစ်ဦးကကြယ်ပွင့် type ကိုချလည်းသုံးပိုင်း, ထိုမော်တာ, အသွားခြားနားချက်ဂြိုဟ်လျှော့ချတဲ့ (X) သို့မဟုတ် cycloid လျှော့ချ (Z ကို) နှင့်နဂါးအမျိုးအစားချပါဝင်ပါသည်သောလျှပ်စစ်ကိုဖျက်ထုတ်အဆို့ရှင်, ဟုခေါ်သည်။ နှစ်ခု series နှင့် 60...
သငျသညျ Jian သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Co. , Ltd ကြီးများနှင့်အလတ်စားဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်အသစ်တစ်ခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။...
tag ကို: anti-ချေးဖုန်ဖယ်ရှားရေးလေ့လာကြရအောင် , စတား Angle Dedusting လေ့လာကြရအောင် , မြို့ပတ်ရထား Bag မူဘောင်
မြင့်မားသောအပူချိန် rotary အဆို့ရှင်
tag ကို: ကြယ်ပွင့်အမျိုးအစား discharge Valve , Lock ကို Valve လှည့် , ကြယ်ပွင့်ပုံသွင်းကြှေးမှေး
မြင့်မားသောအပူချိန် P84 polyimide ဖုန်မှုန့် filter ကိုစုဆောင်းအိတ်
tag ကို: ဘိလပ်မြေ polyester Filter ကို Bag , အပူကိုခံနိုင်ရည် PTFE ဖုန် Bag , polypropylene ဖုန်ကောက်ခံရေးဘိလပ်မြေ Filter ကို Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ မြင့်မားသောအပူချိန် P84 polyimide ဖုန်မှုန့် filter ကိုစုဆောင်းအိတ်
မြင့်မားသောအပူချိန်စက်မှုလေထု filter ကို
tag ကို: မုန့်ညက် Mills က Air ကို Filter ကိုအရောင်း , non-ယက်ဖုန်ကောက်ခံရေး Filter ကို Bag , PPS ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ Dedusting Filter ကို Bag
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ ခိုင်မာတဲ့အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခံနိုင်ရည် Ryton ဖိုင်ဘာ filter ကိုအထည် / PPS filter ကိုခံစားခဲ့ရ: 1. အဆိုပါအလုပ်လုပ်အပူချိန်တိုတောင်းသောအချိန်အလုပ်လုပ်အပူချိန် 210 ℃ဖြစ်တယ်, 190 ℃ဖြစ်တယ်, ယင်းအရည်ပျော်မှတ် 285 ℃,...
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်အပ် filter ကို
tag ကို: အိတ်လက်သီးဖြင့်ထိုးဖောက်မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်အပ် , အက်ဆစ်အယ်လကာလီတစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ် Bag , စက်မှုအက်ဆစ်အဘို့အအက်ဆစ်အယ်လကာလီ Bag
မြင့်မားသောအပူချိန် filter ကိုအိတ်လေးအိတ် filter ကို၏စစ်ဆင်ရေးအတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် cylindrical filter ကိုအိတ် duster အတွက်ဒေါင်လိုက်ဆိုင်းငံ့ဖြစ်ပါတယ်။ filter ကိုအိတ်များ၏ထည်နှင့်ဒီဇိုင်း, filtration...
ကြယ်ပွင့် type ကိုချ -YDJ-HG (စတုရန်းပါးစပ်) အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန် rotary အဆို့ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန် P84 polyimide ဖုန်မှုန့် filter ကိုစုဆောင်းအိတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန်စက်မှုလေထု filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်အပ် filter ကို အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Wholesale မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge from China, Need to find cheap မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge as low price but leading manufacturers. Just find high-quality brands on မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge produce factory, You can also feedback about what you want, start saving and explore our မြင့်မားသောအပူချိန် Discharge, We'll reply you in fastest.